N-GUN JA WA: ယူဂိုဆလားဗီးယားလို အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ဖြစ်သွားမယ့် လမ်းစ
ယူဂိုဆလားဗီးယားလို အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ဖြစ်သွားမယ့် လမ်းစ
မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှု တွေဟာ- အစ္စလာမ် သာသနာဝင် များကို ဦးတည် တိုက်ခိုက် နေပေ မယ့်၊ မွတ်ဆလင်တွေ မျိုးမတုံးဘဲ-၊ နိုင်ငံတော်ကြီး တစ်ခုလုံးသာ အစိတ် အမွှာမွှာ ကွဲသွားစေဘို့ ဦးတည်နေ ပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အရေးဟာ ၁၉၉၀ နှစ်များဆီက ယူဂို ဆလား ဗီးယား ပုံစံနဲ့ တစ်ထပ်တည်း တူညီနေ ပြီး-၊ သုံးပင်လိမ် ပတ်ရှုပ်နေတဲ့ ပုံစံကလည်း ယူဂိုးဆလား ဗီးယား မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်နဲ့ ကွက်တိတူညီနေပါ တယ်။
ယူဂိုဆလားဗီးယားမှာ ဆာ့ဗ်လူမျိုးစုကြီးထဲက မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒီတွေ အာဏာရလာတယ်၊ တစ်ပြိုင် နက်ထဲမှာ အာဏာ လက်ကိုင်မရှိတဲ့ အခြားသော ဆာ့ဗ် လူမျိုးကြီး ၀ါဒီတွေက- လူများစုကိုးကွယ် ယုံကြည် တဲ့ ခရစ်ယာန် အယူသည်းမှုနဲ့ မွတ်ဆလင် မုန်းတီးမှုကို ဘုရားကျောင်းတွေ ကိုယ်တိုင်က သွန် သင်သွေးဆွ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် မှုတွေကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြုလုပ် လာခဲ့တယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ခွဲထွက် လိုတဲ့ အုပ်စုတွေက လည်း လူနည်းစု မွတ်ဆလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်များအကြား ပဋိပက္ခတွေကို ထပ်ဆင့် ဖန် တီးပေးခဲ့တယ်။
အာဏာပိုင်များနဲ့ အတိုက်အခံများက လူများစုကို အသုံးချပြီး မိမိအာဏာတည်မှု၊ အာဏာရမှုအတွက် လူများစု ရဲ့ ထောက်ခံမှုတွေကို ရရှိအောင် ဖန်တီးနေခိုက်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် မွေးလိုက်တဲ့ ဘုရားကျောင်း များရဲ့ လှုံ့ဆော်မှု များက- မွတ်ဆလင်ကို မုန်းတီးရမယ် ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးတာ ၀န်တစ် ရပ်လို ဖြစ် လာကြောင်း သူတို့ ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ခံစားမှုတွေ ကိန်းဝပ်လာခဲ့ တယ်။ နောက် ဆုံး မှာ နိုင်ငံရေးအာဏာနဲ့ ဘာသာရေးတာဝန် နှစ် ခုပေါင်းပြီး ခေါင်းဆောင်များရဲ့ နှလုံးသားကို ပြန်လည် အ ဆိပ် သင့်စေခဲ့တယ်။ ဒီအခါမှာ သူတို့ဟာ ယူဂိုဆလား ဗီးယား ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာနဲ့ လူမျိုးစုံနေ ထိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုကို မေ့သွားပြီး-၊ ငါတို့လူမျိုးကြီးကပဲ အနိုင်ရရ မယ်ဆိုတဲ့ မဟာလူမျိုးကြီးစိတ် ၀င်သွားခဲ့တယ်။- ဒီလိုနဲ့ ခေါင်းဆောင်များကိုယ်တိုင် အမှားတွေကို ဆက်တိုက် ကျူးလွန်လိုက်ပါတော့ တယ်။
ဆာ့ဘ်လူမျိုးများရဲ့ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကို လက်မခံလိုတဲ့ ခရိုအေးရှား၊ မွန်တီနီဂရိုး- စတဲ့ ပြည်နယ်တွေက ၀ရုန်းသုဉ်းကား ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေမှာ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ လစ်ဟင်းမှု၊ မထိန်းသိမ်းလိုမှု၊ မထိန်းသိမ်းနိုင် မှုများကို အကြောင်းပြပြီး ခွဲထွက်ဘို့ ခြေလှမ်းများကို စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်ထိ- လူမျိုးကြီး ဆာ့ဗ်ဘက်ကပဲ တစ် စိုက်မတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ-၊ လူမျိုးကြီး ဆာ့ဗ်များကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုနဲ့ ခွဲထွက်ရေးသမား များရဲ့ အမျက်ဒေါသများကို စုပြုံခံလိုက်ရပြီး- မွတ်ဆလင်လူနည်း စု ဒေသတွေ မှာ မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုထိ ခံလိုက် ရပါတော့တယ်။ မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာရဲ့ သည်းခံပေးမှုဟာလည်း ဂိတ်ဆုံး သွား ခဲ့ပြီး-၊ UN မ၀င်ရင် ငါတို့ ၀င်မယ် ဆိုတဲ့ ရာဇသံတွေနဲ့- တူရကီနဲ့ အီရန်တို့က တိုက်ရိုက်စွက် ဖက်ခဲ့ ရပါတော့တယ်။ အီရန်ဝင်လာရင် ငါတို့ သိက္ခာ ကျသွားတော့မယ်- ဆိုပြီး US ကလည်း ဖင်ပူ လာခဲ့ ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ US နဲ့ UN တို့ ၀င်လိုက် ရပါတော့တယ်။ UN အစီအမံနဲ့ မွတ်ဆလ င်များရာဒေသ ဘော့စ်နီးယား ဟာဗီဂိုဇီးနားကို ဆာ့ဗ်တို့ရဲ့ အန္တရာယ် က ကာကွယ်ပေးဘို့ သီးခြား အုပ်ချုပ် ခွင့်ပေးလိုက်ရတယ်။ UN တပ်ရှိနေပြီ ဆိုတော့- အခြားနေရာတွေမှာလည်း ဆာ့ဗ်တို့က ၀င်ရောက် စွပ်ဖက်နိုင်မှု ယုတ်လျှော့သွားပြီး-၊ အခြားသော အုပ်စုများရဲ့ ခွဲထွက်ရေးများ အလို အလျှောက် အောင်မြင် သွားပါတော့တယ်။ ဆာ့ဗ်တို့ရဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အလွဲသုံးစားပြုမှုများဟာ “မည်သူ မပြု မိမိမှု”ဘ၀နဲ့ အစဉ်အလာနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲသွားရပါတော့တယ်။
အခုမြန်မာပြည်ဟာလည်း ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ ဘာသာရေးအလွဲသုံးစား လုပ်မှုတွေကို အာဏာပိုင်တွေ၊ အတိုက်အခံတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အကြီးအကျယ် ကျူးလွန် လာတာ ကို ငြင်းမရအောင် တွေ့နေရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်မုန်းတီးရေးကို ဦးဆောင်လှုပ်ရှားလာတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာ သာ ဂိုဏ်းကြီးတွေ ကို အာဏာပိုင်များက တားဆီးခြင်း မရှိတဲ့အပြင် လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်ဘို့ ခွင့်ပြုပေး ထားပါတယ်။ အတိုက် အခံများကလည်း ဒီကိစ္စမျိုးကို ၀င်ရောက်တားမြစ်မရှိတဲ့ အပြင် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ပံ့ပိုးလာတာကို တွေ့နေရပါ တယ်။ အခြေခံလူထုကြားထဲမှာ မွတ်ဆလင်ကို မုန်းတီးရခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားရေး ဘာသာရေး အဖြစ် ခံစားလာသည်ထိ ပြန့်နှံ့လာပြီး ထိန်းမနိုင်အောင် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ပိုဆိုး တာက အထူးလေ့ကျင့်ပြီး အုပ်စုကြီး တစ်ခုက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြဿနာ တက်အောင် နေ ရာ တိုင်းမှာ တမင်ဖန်တီးလာနေခဲ့တယ်။ ဒါကိုလည်း အစိုးရပိုင်းက မသိဟန်ဆောင်နေခဲ့ တယ်။
ပြဿနာ တစ်ခါ ရှာတယ်။ မွတ်ဆလင်နှိပ် ကွပ်မှုကြီး တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် သမ္မတ ဆိုသူက နိုင်ငံ တစ်ကာမှာ မျက်နှာချိုသွေး အသနား ခံတယ်။ အသနားခံပြီး တာနဲ့ နောက် တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ပြုလုပ် တယ်။ နောက် တစ်ကြိမ် အသနားခံတယ်။-- အခု သုံးကြိမ်မြောက် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ မွတ်ဆ လင်နိုင်ငံများရဲ့ သည်း ခံပေးမှုက လည်း ဂိတ် ဆုံး သွားခဲ့ပြီ။ မွတ်ဆလင်နိုင် ငံတွေမှာ ကိုယ့်အရေး နဲ့ ကိုယ်ရှုပ်နေတယ်-၊ ငါတို့ဘက်ကို မ လှည့်နိုင် ဘူး ဆိုတဲ့ အသိ ဉာဏ်မဲ့ သုံးသပ်မှုတွေ မှား ယွင်းကြောင်း အဖြေပေါ်လာ ပါလိမ့် မယ်။
မွတ်ဆလင်နိုင် ငံတွေဟာ မိမိဘက်က မလွန်ရလေအောင် UN ကို အလုပ်လုပ်ဘို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ တယ်။ မြန်မာ့ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ တရားခံတွေ မဖြစ်ရလေအောင် မွတ်ဆလင် ကိစ္စမှာ နိုင် ငံ ကြီးတွေ ကို တာဝန်ယူဘို့ မေတ္တာရပ်ခံ ခဲ့တယ်။ ဒီမှာလည်း အချိန်ကာလက သတ်မှတ်ချက် မဲ့ မဟုတ် သ လို-၊ အခြေအနေ မှာလည်း ချွင်းချက်မဲ့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
ဒီ အခြေ အနေကို မြန်မာ အစိုးရက မထိန်းသိမ်းဘဲ- ဆက်လက် လွှတ်ပေး ထားမယ် ဆို ရင်တော့-၊ မြန် မာနိုင်ငံမှာ မွတ်ဆလင် မျိုး မပြုတ်ဘဲ-၊ ပြည်ထောင်စု ကြီးပဲ အစိတ်စိတ် အမွှာအမွှာ ပြိုကွဲ သွား ဘို့ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ လုံးဝ ချောင်လွှဲလို့ မရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ UN က ၀င်ရောက် စွပ်ဖက် ရပါတော့မယ်။ သို့မဟုတ် မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာက သည်းခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း UN ကိုယ်တိုင်က သိနေပါပြီ။ UN မ၀င်ဘဲ မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာက ပတ်သက် ရရင် အခြေအနေ က ပိုဆိုး သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားပြီး သာယာအေး ချမ်းနေတဲ့ အခြားနိုင်ငံများလို မြန်မာပြည်ကြီး ဖြစ်လာမလား ဆိုတဲ့ စိတ် ကူးတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီး- လက်စားချေမှု၊ မုန်းတီးမှု၊ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်မှု၊ သတ်ဖြတ် ရိုက်ထောင်း မှုတွေနဲ့ ဆူ ပွက်ကုန်မယ့် အရေးကို အာဏာပိုင်များ၊ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်များ ကိုယ်တိုင် ချက်ချင်းတားမြစ် ရပ်တန့်ပေး ဘို့နဲ့ ကျူးလွန်သူ တရားခံတွေ၊ ကျူလွန်စေဘို့ သွေးထိုး လှုံ့ဆော်သူတွေ၊ အသင်းအဖွဲ့တွေ အားလုံးကို ချက်ချင်း အရေး ယူပေးဘို့ လိုပါတယ်။
USSR Collapse happened 1985 - 1991. Ugoslavia breakup happen 1990-1995. Myanmar breakup is unlikely because recent country leader Presiden Thein Sein is army leader, not civilian.
Posted by N-gun Ja Wa at 1:11 AM